Soo-dejiyaha iyo dhammaan tilmaamaha Huawei Nova 6 waa la sifeeyey | Androidsis
Qiyaastii laba toddobaad ka hor ayaan ka hadlaynay Qalabka Nova ee soo socda ee Huawei. Qaar ka mid ah xanta hore iyo dukumiintiyadu waxay qeexayaan taageerada 5G isku xirnaanta ay yeelan doonto, sidaa darteed waxaan qiyaasi karnaa in qaabkeeda soo socota ay yeelan doonto qeexitaan isku xirnaanta noocaas ah.
Markan warbixin cusub ayaa ka soo muuqatay My Sicirka Sicirka kaas oo shaaca ka qaaday qeexitaanada buuxa ee Huawei Nova 6 oo ay kujiraan kuwa bixiya tan.
Huawei Nova 6 ayaa lagu xantaa inuu ku qalabaysan yahay a Shaashad 6.44-inji ah oo bixisa FullHD + qaraar ah 2,340 x 1,080 pixels. Maaddaama ay leedahay akhris-qaade dhinac-dhajinta ah, waxaa lagu qalabeyn karaa shaashadda IPS LCD. Warbixinadii hore waxay sheegteen in Nova 6 ay muujineyso heerka cusbooneysiinta 90Hz.
Huawei Nova 6 soo bandhigid
Feerka elliptical ee muuqaalka Nova 6 ayaa leh muraayad aasaasi ah oo 32-megapixel ah iyo 12-megapixel dareemayaal labaad ah. Qaybta dambe ee taleefanka ayaa sidoo kale la sheegay in lagu qalabeeyay a 60 megapixel + 16 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel afar qaabeynta kamarada. Waxaa la qiyaasayaa in 686-megapixel Sony IMX60 uu noqon karo aaladda ugu weyn Nova 6.
Nova 6 waxay u badan tahay inuu ku shaqeyn doono Chipset-ka Kirin 990. Smartphone-ka wuxuu ku imaan karaa 8GB iyo 12GB LPDDRX oo RAM ah. Waxay ku imaan kartaa 2.1GB iyo 128GB UFS 256 noocyada kaydinta. Waxaa lagu buuxin karaa batari 4.000 mAh ah. Muuqaalka 3C ee taleefanka ayaa shaaca ka qaaday inuu la imaan karo 40-watt oo ah tiknoolajiyad dhaqso badan ku shubaysa.
Warbixintu si cad uma xusin noocyada kala duwan ee Huawei Nova 6. Hase yeeshe, waxay sheegaysaa in saddexda nooc ee taleefanka lagu kala iibsan karo qiime ahaan 3.499 yuan (~ 450 euro ama sicirka $ 500), 3.799 yuan (~ 490 yuuroo ama 540 euro). doolar in la beddelo) iyo 4.099 yuan (~ 430 euro ilaa 585 doolar in la beddelo). Sidoo kale ma qeexayo goorta la sii deyn doono, laakiin waxaan rajeyneynaa inay dhowaan noqon doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Huawei Nova 6 ayaa gebi ahaanba la daadiyay iyada oo ay la socdaan dhammaan qeexitaankiisa iyo qiimayaasha